जब मेरा श्रीमानले मलाई छोरीको शिक्षकसँग फेला पारे …. - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / जब मेरा श्रीमानले मलाई छोरीको शिक्षकसँग फेला पारे ….
मेरो श्रीमान् सधैं उग्र स्वभावको र अहंकारी प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ। छोरी र परिवारका सदस्यहरूको कारणले मैले उसलाई कहिल्यै छोडिन। हामी दुवैले एकअर्कासँग विवाह गर्न बा’ध्य भयौं । किनभने हाम्रा बुवाहरूबीच पुरान ब्यापारी र व्यापारमा पाटन रि भएका कारण उहाँसँग मेरो भेट भएको थियो ।
यो मेरो परिवारमा चलिरहेको विवाहको घटना हो, जुन म सबैभन्दा घृणा गर्छु। मैले मन पराउने मान्छेसँग मैले बिवाह गर्न पाइन्। बिवाह पछि मैले मेरो श्रीमानबाट पनि माया पाएकी छैन। उसले मलाई किन माया गर्दैन त्यो मलाई कहिल्यै बताएन।
मेरी छोरीको एउटा गणित बिषय पढाउने एउटा शिक्षक् थियो जसलाई म बिस्तारै मन पराउँन थाले । उसलाई म आँखा चिम्लिरहेको बेलामा पनि देख्न थाले उसकै बारेमा सोच्न थाले ।
उनी हेर्दा निकै आकर्षक थिए । उनको शैली एकदम राम्रो थियो हास्नेर बोल्ने जसका कारण मलाई उनीप्रति धेरै आकर्षण बढ्दै गयो । यो घटना पछि मैले बुझें कि विवाहित केटीहरु लाई बिहे पछि श्रीमान बाट साथ नपाउंदा परपुरुषसँग अफेयर हुनु ठुलो कुरा रहेन छ । घरमा श्रीमान सधै अफिसको काम हो या अन्य बिजनेस ब्यापार जसमा धेरै बिजी हुने धेरै व्यस्त हुने अनि घरमा श्रीमती छोराछोरी घरमा भएको महसुस नै नगर्ने । हो मेरो श्रीमान् पनि फरक थिएनन्। मेरै श्रीमानका कारण सुरु भयो परपुरुषसँग मेरो अफेयर ।
यिनी त्यहि परपुरुष हुन् जो मेरो छोरीका शिक्षिक थिए । मैले मेरा श्रीमान बाहेक मेरी छोरीको शिक्षिकसँग एक्स्ट्रा सम्बन्ध बनाएकोमा मलाई कुनै पछुतो छैन। त्यो किनभने मैले एक जना पुरुषबाट माया र मेरो इच्छा पुरागरिदिने पुरुष पाएकी थिएँ जसले महिलालाई कसरी खुसी बनाउने भनेर जान्दथे। उनी हेर्नमा धेरै से’ ‘क्सी थिएनन्, तर स’ह’वा’स ग’र्दा उनले मलाई भरपूर्ण खुसि महसुस गराए।
यो संगै म उनिसंग हरेक दिन भेट्न र आफ्नो इच्छा पुरा गर्न आतुर हुने गर्थे र उ पनि । घरमा कोही नहुँदा हामी धेरै समय सँगै बिताउँथ्यौं । यस अवधिमा मेरो घरमा घरेलु कामदारलाइ पनि घर बाट निकालिदिए किनभने उनले मेरो श्रीमानलाई हाम्रो स’म्ब’न्धको बारेमा बताउन सक्छिन् भन्ने डर थियो। त्यसपछि मलाई लाग्यो मैले घरमा के गर्छु भन्ने भगवानलाई थाहा हुने छ।
३६ वर्षको उमेरमा, मैले प्रेम र जोश फेला पारे, जसले मलाई सबैभन्दा आनन्द महसुस गर्यो। तर हरेक सामान्य स’म्ब’न्धको कथा जस्तै, एक दिन मेरो श्रीमानले मलाई समाते । त्यो यस्तो बेला थियो जतिबेला म र मेरो प्रेमीले खालि समय र भेट नहुने बेला आफ्ना मोबाइल बाट एक अर्कालाई हाम्रो कल्पनाले भरिएका केही यौ’ ‘न त’स्वि’रहरू पठाउँदै आउने गरेका थियौ।
अफिस बाट श्रीमान घर आउनु भयो म गेट खोल्न तल झरे तर मैले आफ्नो मोबाइल कोठामै छोडेकी थिए । श्रीमान सिधै कोठामा पुग्नु भयो जहाँ मेरो मोबाइल थियो । मलाइ डर लाग्यो म पनि गेट लगाएर हतार गर्दै कोठामा पुग्दै गर्दा श्रीमानको हातमा मेरो मोबाइल थियो ।
मेरो श्रीमान् वाशरूम गए फ्रेस भएर बाहिर निस्केपछि मैले कुराकानी गर्न खोजे तर निकै डर लाग्यो कुरा नै गर्न सकिन। म डराएँ र उसको पछिपछि कोठातिर लागें । उसको हातमा मेरो फोन थियो उसले के देख्यो होला भनेर मेरो मनमा धेरै कुरा खेले। उनी लगातार उनको छेउमा केहि थाहा नपाए जस्तै गरेर बसिरहें । मैले त्यटिया बेलै सोचे यति ठूलो गल्ती कसरी गर्न सक्छु ? कसरि मैले यस्तो सम्बन्ध बनाए मेरो दिमागमा यस्तै प्रश्नहरु आइरहे ।
म यस्तै कुराहरु सोचेर बस्दै थिए तर मेरा श्रीमानले मेरो मोबाइलमा भएका टेक्स्ट म्यासेज पढिरहेको देखे। मलाई धेरै डर लाग्यो कि उसले पक्कै म वा मेरो प्रेमीसँग केहि गर्ला। तर उल्टो भयो। उसले शान्त भएर सोध्यो, ‘यसको बारेमा कसलाई थाहा छ? मैले भने कसैलाई थाहा छैन, उसले फोनलाई भुइँमा फालेर टु’ ‘क्रा टु’ ‘क्रा पारिदियो ।
निराश भएर रिसाएका श्रीमानले मेरो कपालमा औंलाहरू घुमाए सुम्सुम्याउँदै भने, ‘म चाहन्न कि हाम्रो छोरीलाई यी सबै कुराले असर गरोस्। यसबारे कसैलाई थाहा नपरोस् । तिमि को संग यसो गर्दै छौ मलाई मतलब छैन, तर परिवारको रूपमा हाम्रो प्रतिष्ठा दाउमा हुनु हुँदैन। अन्यथा, परिणाम धेरै खराब हुनेछ।
श्रीमान्का यी कुरा सुनेर म पूरै मौन भएँ । तर यस अवधिमा मैले महसुस गरें कि उनले मेरो वास्ता गर्दारहेनछन् र झनै लाग्यो हाम्रो विवाह पूरै नक्कली रहेछ जुन बाहिर देखाउनलाइ मात्रै । यदि मेरो श्रीमान्ले कहिल्यै मेरो ख्याल राख्नुभएको भए, उहाँले मलाई यो कुरा कहिल्यै भन्नुहुन्नथ्यो । उसलाई मेरो अफेयरमा कुनै समस्या नभएकोमा म पनि निकै खुसी थिएँ । श्रीमानका यी कुरापछि मैले एउटा निर्णय लिए जब सम्म मैले आफ्नो इच्छा र खुसि पुरा गर्न यो काम गर्न सक्छु गर्छु । मेरा श्रीमानलाइ म प्रति नै कुनै इच्छा छैन भने मैले मात्रै पनि एकोहोरो उनलाई भगवान मानेर बस्नुको कुनै अर्थ थिएन । समाजले हेर्दा हामी विवाहित देखिएपनि भित्रभित्रै मेरा श्रीमानको पनि प्रेमिका थिईन र मेरो पनि प्रेमी जो संग हामी आफ्नो खुसि साट्ने गर्यौ ।